Galaxy S9 အတွက်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အချိန်နဲ့ စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung! – AsiaApps
Samsung အနေနဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9+ ကို ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှာကျင်းပမယ့် MWC 2018 မှာထုတ်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီး စတင်ရောင်းချမယ့်အချိန်ကတော့ မတ်လအစပိုင်းလောက်မှာဖြစ်မှာပါ။ ကြည့်ရတာ ဒီဇင်ဘာလအလယ်ပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Galaxy S9 ရဲ့သတင်းဟာမှန်နေပြီနဲ့တူပါတယ်။ Website တွေမှာပြန့်နေတဲ့ ပုံကိုကြည့်ရင် Galaxy S9 ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဟာ Galaxy S8 နဲ့အနည်းငယ်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
A rumor image of Samsung Galaxy S9
A senior official of Lee Myung-bak said, “We decided to makeareservation sale with Samsung Electronics for7days from March 2-8,” he said. Samsung Electronics unveiled the Galaxy S9 in Barcelona, ​​Spain on February 26 (Korean time).
Source :www.etnews.com (Korea)
Samsung ရဲ့စီနီယာတစ်ဉီးဖြစ်သူပြောကြားချက်ကိုကြည့်ရင် Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9+ ကို ၂၀၁၈ မတ်လ၂ ရက်နေ့ကနေ ၈ ရက်နေ့အထိ ၇ ရက်တာရောင်းချသွားမှာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့ရက်ကတော့ ကိုရီးယား အချိန်နဲ့ပဲတွက်မှာပါ။
ထုတ်ဖော်မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်နဲ့ ရောင်းချမယ့်အချိန်က Samsung Galaxy S8 တုန်းကဆိုရင် အချိန်တစ်လကျော်ကွာဟပါတယ်။ Galaxy S8 နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် Galaxy S9 ရဲ့ရောင်းချမယ့်အချိန်ကိုသိပ်မစောင့်လိုက်ရဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ Galaxy S9 အတွက်စျေးနှုန်းပိုင်းက ဝမ် ၉၅၀,၀၀၀ ကျော် (သို့) ပတ်လည်လောက်မှာ ရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Shipping အခွန်နဲ့ဘာညာ အကုန် ပေါင်းတွက်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ၁၃ သိန်း၊ ၁၄ သိန်းလောက်ကအသာလေးပါပဲ။
“The Galaxy S9 series is more focused on user convenience than the new design,”aSamsung official said.
Samsung ဟာ Galaxy S9 ကို ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ဖို့ထက် အသုံးပြုသူတွေ သက်သောင့်သက်သာအသုံးပြုနိုင်အောင်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖန်တီးထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ဒီဇိုင်းပိုင်းက S8 နဲ့အရမ်းကြီးကွာဟမနေတာပါ။
စတင်မိတ်ဆက်မယ့်အချိန်၊ ရောင်းချမယ့်အချိန် နဲ့ စျေးနှုန်းခန့်မှန်းခြေတွေကို သိရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် Samsung အသုံးပြုသူ/Fan တွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမှာဖြစ်သလို ကြိုက်ရင်တန်းဝယ်နိုင်အောင် လည်းပိုက်ဆံလေးတွေစုထားကြပါလို့ အကြုံပြုပါရစေ။
Samsung Galaxy S9 pre-order and pricing for South Korea revealed https://t.co/giq4H8FE7O pic.twitter.com/pJbdNq6Jmo